China Londolozwe imifuno braised inyama yehagu Manufacture kunye Factory | HUIQUAN
1.Ubushushu kwaye ubeke phezu kwerayisi
2.Eqhotsiweyo kunye neminye imifuno
Inyama yehagu,Amanzi,Isosi yeSoya,Iswekile,Ityuwa,Ioli yemifuno esulungekisiweyo,Iziqholo.
198G 198G * 72 I-TINS / CTN 1400 CTN
198G * 36 I-TINS / CTN 2800 CTN
Inkampani yethu izibophelele kwimveliso kunye nokupakishwa kweemveliso ezahlukeneyo ezinkonkxiweyo. Umgangatho wemveliso uphumelele imigangatho engqongqo yokhuseleko lweshishini lokutya lamazwe ngamazwe kwaye uphumelele isiqinisekiso senkqubo yomgangatho woshishino. Kwangaxeshanye, inkampani iye yaseka OEM inkonzo enye-stop ezininzi ezaziwayo-kakuhle nedumileyo brand ekhaya nakwamanye amazwe, kwaye uyonwabela indumiso eliphezulu kushishino.
Inkampani yethu ineendibano zocweyo zemveliso kunye nezixhobo, iqela lobugcisa kunye neqela lenkonzo elineminyaka emininzi yamava oshishino, kwaye amagcisa aphambili aneminyaka engaphezu kwe-10 yamava oshishino. Sinamaqabane avela kwimimandla emininzi kunye namazwe, afana neSolomon, Philippines, Mauritius, Papua New Guinea, Malaysia, India, njl.
Izinto eziluncedo: Sinokubonelela ngebrand yethu kunye neemveliso zebrand yakho ngaxeshanye. Sinokubonelela phantse zonke iimodeli ezifunekayo zeemveliso. Xa kuthelekiswa nabakhuphisana abaninzi, iimveliso zethu zizinzile kwaye zibalaseleyo.
Ngaphambili: Inyama yehagu kunye neHam ilula kwaye isempilweni
Inyama yehagu yesidlo sasemini, Inyama yehagu enkonkxiweyo, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, I-Canning Beef Brisket, Inkukhu enkonkxiweyo,